ကြေးကြီးတိုင်း သန့်ပါမလား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကြေးကြီးတိုင်း သန့်ပါမလား
Posted by moethidasoe on Jun 30, 2011 in Creative Writing, Health & Fitness, Short Story | 37 comments
အမျိုးသားဆရာဝန် တစ်ယောက် ပြောပြတဲ့ ဇာတ်လမ်းကို စကားပြောနဲ့ ပြန်ရေးထားတာပါ
(confidential ကို ထိန်းတဲ့အနေနဲ့ အဲဒီဆရာဝန်က နာမည်၊ နေရပ်တွေ မပြောပြခဲ့ပါဘူး၊ သင်ခန်းစာ ယူစေချင်လို့ ပြောပြတာပါ၊ အခုလဲ ကျန်တဲ့လူတွေ တွေးတတ်စေချင်လို့ အားလုံး ခြုံပြီး ရေးလိုက်တာပါ)
တစ်နေ့တော့ လူနာ တစ်ယောက် ရောက်လာတယ်
ဆရာ .. ကျွန်တော် ဆီးအောင့်ပြီးတော့ အဖြူဆင်းနေတယ်
မှန်းစမ်း .. ခင်ဗျားက ဂနိုကျနေတာဗျ ..
မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ် .. ကျွန်တော့်ကောင်မလေး က သန့်တယ် ဆရာ ..
ခင်ဗျားကသာ သန့်နေတယ်လို့ ဆိုတာ ခင်ဗျား အခု ထိလာပြီ မဟုတ်လား
မဟုတ်သေးဘူးထင်တယ် ဆရာ .. အခုဟာက အပူအစပ် စားတာ များလို့ ဖြစ်တာ မဟုတ်ဘူးလား .. ကောင်မလေးက ကျွန်တော့် မျက်စိအောက်တင် ကြီးလာတဲ့ သူပါ .. အနေ သိပ် သန့်တာ .. ကျွန်တော်တောင်မှ မနည်း စည်းရုံးယူရတာ
ဒါဆိုရင် ခင်ဗျား ဘယ်လောက် ပေးလိုက်ရသလဲ
၅၀၀၀၀ ပေးလိုက်ရတယ် (အဲဒီအချိန်တုန်းက ဆရာဝန် လစာ တစ်နှစ်စာ နီးပါးရှိတယ်)
ကဲ ခင်ဗျားက ၅၀၀၀၀ ပေးနိုင်တာကို ကြေးကြီးတယ် ဆိုပြီး တစ်ခြားလူတွေ မလိုက်နိုင်ဘူးလို့ ထင်နေတယ် .. ခင်ဗျားထက် တတ်နိုင်တဲ့လူ .. ခင်ဗျားထက် စိတ် ထန်နေတဲ့လူ မရှိဘူးလို့ ထင်နေတာလား .. ခင်ဗျားထက် နှစ်ဆ ပေးနိုင်တဲ့လူက ပေးရင်ရော ခင်ဗျား ကောင်မလေးက မလိုက်ဖူးလို့ ထင်နေလား .. နောက် အဲဒီ ပိုပေးနိုင်တဲ့လူကရော ဟိုမှာစား ဒီမှာစားနဲ့ သန့်တယ်လို့ ရှိပါ့မလား .. အဲဒါဆိုရင် ခင်ဗျားကောင်မလေးရော သန့်ပါ့ဦးမလား .. စဉ်းစားကြည့်နော် .. ဒါ ယောက်ျားချင်း မို့လို့ ရှင်းအောင်ပြောပြတာ
(ဟုတ်တယ်နော် မိန်းမ ဆရာဝန်ကို သူတို့ ဒီလို ဘယ်ပြောပါ့မလဲ .. သူငယ်ချင်းကို ကျေးဇူးတင်တယ်)
သူ.. တစ်ချက် တွေသွားတယ် .. နောက်မှ ..
အင်း ဒီလိုဆိုတော့လဲ ဆရာပြောတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် လေ ..
ဖြစ်နိုင်တယ် မဟုတ်ဘူး .. ဖြစ်ကို ဖြစ်နေတာ .. ခင်ဗျား သက်သေပြပြီးပြီလေ ..
အဲဒီနောက်တော့ သူလဲ ဆင်ခြင်သွားတယ် ..
၂၀၀၄ ဧပြီလမှာ ရေးဖြစ်ခဲ့တယ်
ကြေးကြီး = ကြေးများ.. ကြေးများ ကနေ တဆင့်တက်တော့ ဂျီးများတာပေါ့.. ဂျီးများတော့ မသန့်တော့ဘူး ဒါပါပဲ။
ဂျီးထူ သွားတဲ့ သဘော ပေါ့ နော်.. :D
ရောဂါမဖြစ်ချင်လို့တဲ့… သင်္ဘောသားကြီးတယောက်က အရုပ်နဲ့ ၂ပါးသွားနေတာ… အဲဒီလူလစ်တုံး သင်္ဘောတစင်းလုံးက..သူ့ဘိုမအရုပ်ဝိုင်းသမထားတာ.. အဲဒီလိုနဲ့..ရောဂါရတဲ့ဇတ်လမ်း..
အဲလိုဘဲ သန့်မသန့် စစ်မစစ်တိုင်းတဲ့ မီတာရှိရင်သိပ်ကောင်းမှာဘဲ ..လို့။
ဟုတ်တယ် Dr. ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း ကျွန်မတို့ ဆေးခန်းကို လာနေတဲ့ အမျိုးသား လူနာ သုံးလေးဦးထဲမှာ ဂနိုတွေချည်းဖြစ်နေကြတာ … ။ ကဲတုန်းက ကဲပြီး မိန်းမမသိအောင် လာကုရတာနဲ့ ကြောက်လိုက်တာများ တုန်နေတာပဲ … ကြောက်တာက တခြားမဟုတ်ဘူး …. သူတို့ ဆက်ပြီး မလိုက်စားလို့ရမှာ စိုးလို့ ကြောက်ကြတာ … ။ မနေ့ ညနေကတော့ ထူးထူးခြားခြား ယောကျာ်းက ဖြစ်လို့ လာပေမဲ့ … မိန်းမပါ ပါလာတယ် … ယောကျာ်းက ပျောက်သွားပြီး အတော်ကြာမှ ထပ်ဖြစ်လို့ ပြန်လာတာ … အခုအခြေနေက အတော်ဆိုးနေတာနဲ့ သူ့ မိန်းမကိုပါ ခေါ်ပြီး ဆေးအတူကုတာ … ။ ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကို ကူးတာလဲတော့ မပြောတတ်တော့ပါဘူး … ဂနိုလူနာလာလျှင် ကြည့်လို့ ကို မရလို့ မျက်နှာချင်း မဆိုင်ပဲ ၊ မျက်နှာလွှဲနေလိုက်တာက များတယ် … ။
အီးဒုံးက စက်ရုံ အသိုင်း အ၀ိုင်းကနေ ဆေးခန်း အသိုင်း အ၀ိုင်းကို ဘယ်တုန်းကရွှေ့ သွားလဲ မသိဘူး။
ဆရာဝန်မဟုတ်တာကတော့ သေချာတယ်။ တောက်လျှောက်လေ့လာကြည့်ရသလောက်ကတော့ အီးဒုံးမှာ
စာရိတ္တပိုင်း ဆိုင်ရာနဲ့ ပါတ်သပ်ပြီး Extremely Proud ဖြစ်တာတွေ တွေ့ ရတယ်။ ကိုယ်နဲ့ မတူ ကိုယ့်ရန်သူ
လို့ သဘောမထားပါနဲ့ ။ တကယ်လို့ဆေးခန်းက မိသားစုပိုင် စီးပွားရေးဖြစ်လို့ကိုယ်က ကောင်တာ ထိုင်သည်
ဖြစ်စေ၊ ဆေးကောင်တာ ၀န်ထမ်းအနေနဲ့လုပ်သည်ဖြစ်စေ၊ ဘယ်လို အကြောင်းမျိုးနဲ့ ပဲ ဆေးခန်းကို လာလာ
ဘာရောာဂါကြောင့်ပဲ လာလာ ၊ သူတို့ အားလုံးဟာ ရောဂါကို ကုစားဖို့ အတွက် ရောက်လာကျတာပါပဲ။
AIDS ရောဂါသည်တွေ ကို ကုသပေးတဲ့ နေရာမျိုးမှာ ဒီလို အတွေး ဒီလို မျက်လုံးမျိုးနဲ့ ကြည့်မိရင် သူတို့ဘယ်လို
နေကြမလဲ ? လိင်ဆက်ဆံမှုကိုတောင် နားမလည်သေးတဲ့ ကလေးတွေတောင် အကြောင်း အမျိုးမျိုးနဲ့ ရောဂါ ကူး
စက်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့အီးဒုံးက သီလရှင် ၀တ်ဖို့ခေါင်းရိတ်ရင်း ရောဂါပိုး ကူးသွားခဲ့ပြီ ဆိုပါဆို့။
အီးဒုံး လိုပဲ အမြင် ရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်က အီးဒုံးကို ကြည့်ပြီး ဘာပြောမယ် ထင်သလဲ ? လူလူချင်း နားလည်တတ်
ပါစေ။ ဦးကျော်သူတို့ထင်ပေါ်မှု အတွက် မဟုတ်ပဲ အယုတ်အလတ်အမြတ် မရွေး အခေါင်းကြီးကို ထမ်းပါတယ်။
အေကိုက်ပြီး သေတဲ့လူမို့ လို့မထမ်းချင်ဘူး၊ ဖာသည် မသာ မို့ လို့မထမ်းချင်ဘူး။ သူခိုး ဒါးပြ အလောင်းမို့ မထမ်းချင်
ဘူး ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုး မရှိလို့ သာ သူတို့လူမှုရေး အလုပ်တွေ ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ကြတာပါ။
တကယ်တမ်း ဘယ်လို စိတ်ဓါတ်မျိုး ရှိသူတွေကို ဘယ်သူတွေက မျက်နှာချင်း မဆိုင်ပဲ မျက်နှာလွှဲနေသင့်လဲ ဆိုတာကို
ဘဲအိုကြီး ဂြိုလ်ကြွနေတယ်လား ။ မနက်က ရေးထားတာ ဘယ်ပျောက်သွားလဲ မသိဘူး … ။ ပြန်ရေးဦးမယ် ။
အောင်မလေး သောက်ကျိုးနည်း ဘဲအိုကြီး 77 ရဲ့ … ဆင်သေကို ဆိတ်သားရေ နဲ့ ဖုန်းချင်မနေစမ်းပါနဲ့ … ကဲချင်တုန်းက မီးကုန်ယမ်းကုန်ကဲပြီး အခုမှ ကာဗာလုပ်မနေနဲ့ … ဒီရောဂါဖြစ်ရတဲ့လူအများစုက အပြင်မှာ ရှုပ်လို့ ချည်းပဲ … ။ လေးလုံးရောဂါနဲ့ ဒီရောဂါက ကူးစက်ပုံချင်း ချွတ်စွပ်တူတာမှ မဟုတ်ပဲ ။ ရောဂါသည်မို့လို့ မကြည့်တာ မဟုတ်ဘူး …အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်တဲ့ ကောင်တွေ အများစုက ဒီရောဂါဖြစ်တာမို့ ရွံရှာ စက်ဆုပ်လွန်းလို့ မကြည့်ချင်တာ နားလည်လား ။ ရှင် နောက်ဘ၀ မိန်းမဖြစ်တော့မှပဲ ရှင့်ယောကျာ်း ဂနိုဖြစ်တဲ့အခါ သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ ဆေးကုပေးလိုက် … ။ ပြောနေတာ က ဖောက်ပြန်တဲ့လူ အများစုဖြစ်တဲ့ ရောဂါအကြောင်း သူက လမ်းကြောင်းလွှဲအောင် AIDS တွေ ၊ ကျော်သူကားတွေ လာလုပ်နေတယ် … ။ အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်နေတဲ့တဏှာရူး လူမျိုး ကျတော့ ကာဗာပေးချင်တယ် … ပုလင်းတူဗူးစို့မို့ လို့ဖြစ်မယ် ။
စာရိတ္တပိုင်း ဆိုင်ရာနဲ့ ပါတ်သပ်ပြီး Extremely Proud ဖြစ်တာတွေ တွေ့ ရတယ်တဲ့လား ….. ထင်ချင်သလိုထင် ဂရုမစိုက်ဘူး ။ စာရိတ္တဆိုတာလည်း proud ဖြစ်နိုင်မှ proud ဖြစ်လို့ ရတာ ရှင့်စာရိတ္တရော ကောင်းရဲ့လား ဆိုတာ ကိုယ့်မျက်နှာကိုယ် မှန်ထဲပြည့်ကြည့်ပြီးမှ လာဆွေးနွေး ။ လူတကိုယ် စိတ်တမျိုးပဲ …ကိုယ်နဲ့ မတူ ကိုယ့်ရန်သူလို့ သဘောမထား ပါဘူး … ပို့စ်တိုင်း ဒေါသမထွက်ထွက်အောင် လိုက်ဖွနေတဲ့ ငကြောင်တွေကိုသာ ဂွစာဘုကလန့်လို့ သဘောထားတာ ။
ကျုပ်ကိုယ်ကျုပ် ဆရာဝန်လို့လည်း ဘယ်တုန်းကမှ မပြောခဲ့ဘူး ။ တရေးနိုးပြီး ရူးတူးတူး ပေါတောတောနဲ့ အရက်ကြောင် ကြောင်နေလည်း အေးဆေးနေ ။ ကျုပ်ဘာသာကျုပ် ဘယ်လုပ်ငန်းခွင်မှာပဲ အလုပ်လုပ် နမ်းအော့ဖ် ယွာဘစ်ဇနဒ်ပဲ ရှင်းတယ်နော် ။
(PS// ဒီတခါ like လုပ်တဲ့လူ ဆယ်ယောက်တောင် မကျော်သေးပါလား … အရင်ပို့စ်တွေမှာ လုပ်နေကြအတိုင်း သိတဲ့လူတိုင်းကို like လုပ်ခိုင်းလိုက်ဦး … ဒါမှ ထုံးစံ အတိုင်း ဆယ်ယောက်ကျော်မှာ ….. like တွေ လုပ်ချင်လည်း လုပ် … အရမ်းတော့ အိုဗာကြီး ဖြစ်မနေစေနဲ့ … ယုတ္တိမရှိလျှင် ငတုံးမဟုတ်တဲ့ စာဖတ်တဲ့လူတွေ ယုံမှာ မဟုတ်ဘူး )
ဟော..ဟော.. ပေါ်လာပြီ။ စကား စကား ပြောပါများ စကားထဲက ဇာတိပြသတဲ့…။
ကိုအောင်ဘု ပြောသလိုပဲ….. ထမိန် အလံ ထူဘလိုက်မယ် ဆိုတာနဲ့ တူတယ်။
ဟေ့ ဒီမှာ အီးဒုံး။ ငါ့စာရိတ္တကို သိချင်လား။ ငါဟာ လူလွတ်။ လူ့ သဘာဝ အရ မူမှန်တဲ့ ကာမစိတ်ရှိတယ်။
ငါလဲ ကာမစိတ်ရှိတယ်။ ဒီတော့ ၀ယ်စားတယ်။ သဘောပေါက်လား ? အိမ်ထောင်ရှိသူတွေ
လူမှုရေးဖောက်ပြန်မှုက ဖောက်ပြန်တဲ့လူရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အပိုင်း။ သူ့ ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုကို သူ့ မိသားစုက
အဆုံးအဖြတ်ပေးလိမ့်မယ်။ လူလွတ်တွေ ၀ယ်စားပြီး အခန့် မသင့်လို့မိုင်းထိရင် နင်က ဘာကိုပြောချင်တာလဲ ?
ကြက်ကြီး လည်လိမ်ထားသလိုပဲ ဆိုတဲ့ စကားကို လက်တွေ့ မြင်ဖူး ချင်ရင် နည်းလမ်းပေးလိုက်မယ်။
အိမ်ပြန်ရောက်ရင် နင့် ပါပါးကြီးကို မေးကြည့် ။ အဖေရေ လို့ … အဖေဟာ အမေနဲ့အိမ်ထောင်ကျပြီးကတဲက
ဒီ့ပြင် မိန်းမတွေနဲ့ဆက်ဆံဖူး သလားလို့…။ အိမ်ထောင် မကျ ခင်ကရောလို့ …။
နင်က မိန်းမကောင်းလို့ ကြွေးကြော်ချင်တယ် ဆိုရင် ဖာခံစားတဲ့ မိန်းမတွေက မိန်းမဆိုးလို့ဆိုပြီး
အဲဒီ ပေတံနဲ့ တိုင်းတာလား ? နင်က ဖာခံ မစားတာနဲ့ ပဲ မိန်းမကောင်း ဖြစ်ရောလား ? နင့်စဉ်းစားစမ်းပါ။
ဖောက်ပြန်သူတွေကို ကာဗာပေးတယ်လို့ ပြောချင်ရင်…..မသိလို့ မေးပရစေ …ဒီရွာထဲမှာ မျိုးတူရာ အုပ်စုဖွဲ့ ပြီး
ငါ့လှေငါထိုး ပဲခူးရောက်ရောက် သောက်ဂရုမစိုက်ဘူး ဆိုတဲ့ မာတုဂါမ လူမိုက် ဂိုဏ်းရှိတယ်ဆို အဲဒါ ဟုတ်လား?
စကား မစပ် …. Like နဲ့Dislike အပေါ်မှာ နင်က တော်တော် သံသယ ကြီးပုံရတယ်။
ခင်ရာဆွေမျိုး တွေက အုံလိုက်ကျင်းလိုက် ၀ိုင်းဟောင်ပေးတဲ့ ဂိုဏ်းထဲကို ငါ မ၀င်ထားမိတာ တော်တော်နာတာပဲ
ငါ့ကိုငါ Like ဖို့ နေနေ နင့်ကို တောင် Dislike မလုပ်ထားမိဘူး ။ မေ့နေလိုက်တာ အခု လုပ်လိုက်ပြီနော် ။
အော် ..ဒါနဲ့ဒီနေ့ က Super Saturday ပဲ…။ အသစ်ကလေးတွေ ရောက်နေတယ်တဲ့ ညကျရင် သွားကဲလိုက်ဦးမယ်။
( PS : မူမှန်တဲ့ လူသားတိုင်း ကာမ ဆက်ဆံကြသည်။ )
nigimi77 ရေ etone နဲ့ ဘယ်လိုများ အငြိုးတွေ၇ှိနေရတာလဲ
ရေးထားတာတွေက နည်းနည်းများ ရင့်သီးလွန်းနေသလားလို့
etone နဲ့ ဘယ်လိုမှ ပတ်မူမရှိလဲပဲ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ nigimi77
ရေးထားတာတွေကို ဖတ်ရတာ တော်တော်လေး အဆင်မပြေသလိုပါပဲ
nigimi77 နဲ့ etone နဲ့က အပြင်မှာလဲ တွေဖူးကြတာလဲ ဟုတ်မယ်မထင်ပါဘူး
ဒါတောင် စာမျက်နာထက်မှာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် နစ်နာအောင် ဘာကြောင့်များရေးရေတာပါလဲ nigimi77 ကပဲ အသက်ပိုကြီးလား etone ကပဲ အသက်ပိုကြီးလားမသိပင်မယ့် ရေးထားတာတွေက တော်တော်လေး ရင့်သည်းလွန်းတယ်လို့ ခံစားမိပါတယ် ။ နောက်၇ွာထဲမှာက ကလေးတွေကနေ အသက်ကြိးတဲ့ သူအထိပါ
ဝင်ရောက် အသုံးပြုတာတွေရှိတော့ အေ၇းအသားလေးကို ဂရုစိုက်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ် ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်ရေးခွင့်၇ှိပင်မယ့် တစ်ခြား ဝင်ပြီးကွန်မန့်ပေးတဲ့ သူတွေကို လေးစားတဲ့ အနေပေါ့
လူတစ်ကိုယ် အကြိုက်တစ်မျိုးဆိုတော့ လွတ်လပ်စွာ သဘောထားကွဲလွဲခွင့်ရှိပါတယ်
ွှအီးတုံးကို ဦးကြောင်တခုပြောပြမယ်။ အသိတယောက် ပြောတာကြားဖူးတာ။ ကောင်မလေးတယောက်ရှိတယ်၊ မာနကြီးတယ်၊ လှတယ်၊ မဟုတ်မခံဘူးပေါ့။ သူကိုရိသဲသဲ့လိုက်လုပ်ရင် ပြန်ဆဲထည့်လိုက်တာပဲ။ တနေ့ကြတော့ လူမိုက်တယောက်က လိုက်စကားပြောတယ်။ ရိုးရိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်၊ မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်း ပက်ပက်စက်စက် ပြောတာ။ တမင်လိုက်ချိုးတဲ့ သဘောပေါ့။ မိန်းခလေးနဲ့ ယောက်ျားလေး သာမန်အခြေအနေမှာ ဘယ်သူကပို ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း ပြိုင်ပြောနိုင်မလဲ။ ကိုယ်က ငါးစိမ်းသည်ဆိုရင် တမျိုးလေ။ ဒီတော့ ရှောင်သင့်တဲ့သူကိုရှောင်၊ ရပ်သင့်တဲ့အချိန်မှ ရပ်နိုင်တာ အကောင်းဆုံးပဲ။
ကို (77) ရေ ကျုပ်လည်းမူမှန်တယ်နော်
ညနေ ၀င်ခေါ်အုံး ပုတ်သင်ညိုတစ်ကောင် ခါးပိုက်ထဲထည့်ပြီး
မိန်းမကောင်း ဆိုတာ ဘာလဲ ။။။
ပေါင်နှစ်လုံးကြား လက်ထည့်ပြီး ကွေးကွေးလေးအိပ်တတ်တဲ့ မိန်းခလေး
ကွန်ပြူတာရှေ့မှာ ခန့်ခန့်ကြီးထိုင်ပြီး ရာထူးတစ်ခုယူထားတဲ့မိန်းခလေး
မနက် ညနေ ဖယ်ရီ နဲ့အလုပ်သွားတဲမိန်းခလေး
လစာ(6)သောင်းလောက်ကို (3)သောင်းဘိုးအ၀တ်စားဝယ်ပြီး ကျန်တာမှအိမ်ပြန်ပေးတဲ့မိန်းခလေး…တွေလားဗျို့။။။။။
ညနဲ့ မနက် အိမ်စရိတ်ကို စိတ်တွက်တွက်ပြီး အိမ်ကမိသားစုအတွက်(အရှက်ကိုမငဲ့ပဲ)
သူတိုင်းတဲ့ ပေတံက …အကျိုး ကြီး ဖြစ်မယ်ဗျ….
ကျွန်တော်ကို ဘီလူးဋီကာ မှာထမီဝတ်ခိုင်းတဲ့ အမကြီးက ခင်များနဲ့လဲမတည့်ဘူးကို
သူပြောသလို သာနေရမယ်ဆို ကွန်ဒုံး လုပ်တဲ့စက်ရုံတွေပိတ်
ကာကွယ်ဆေး ထုတ်တဲ စက်ရုံတွေ ပိတ်ရုံပဲရှိတော့မယ်
ဂနို လူမမာ တွေကြည့် မရရင် (AIDS) လူမမာ ကူညီစောက်ရှောက်မူ့လုပ်ငန်းတွေဆို
နှုတ်ခမ်းမွေးကားကား နဲ ငါးဇင်ရိုင်း ပဲဖြစ်ချင်တယ်။။။ဒါမှ အီးတုန်း ကို။။။
Dr. ကျွန်မအားနာပါတယ် ဒီပို့စ်မှာ အကျဉ်းတန်တဲ့စာတွေ ရေးရမှာ … ဒါပေမဲ့လည်း လာလာခွပ်ချင်နေတဲ့ ငနဲက တစခန်းထတော့ မပြောမပြီး မတီးမမြည်ဆိုသလိုပါပဲ ။
ဟဲ့ဘဲအိုကြီး စကားထဲက ဇာတိပြတာတွေ မပြတာတွေ ငါ့ကိုလာမပြောနဲ့ … ငါ့စိတ်ကို ဒေါသမထွက်ထွက်အောင် လာ ဖွနေတဲ့နင်ကရော ပုံမှန်စိတ်ဟုတ်ရဲ့လား သေချာစဉ်းစား ။ ထမိန်အလံထူတာ မထူတာ နင့်အလုပ်မဟုတ်ဘူး ။ နင်လည်း ၀ါသနာပါလို့ ထမိန်အလံထူချင်လျှင် ထမိန်ဝတ်ထားလေ ။ နင့်အဖေအောင်ဘုလည်း ဆွဲမထည့်နဲ့ …. ။ စစ်ကူတောင်းမနေနဲ့ … ။ ငါ့မှတ်ဥာဏ်တွေ အကောင်းကြီးရှိသေးတာမို့ နင်တို့သားဖရေးခဲ့တဲ့ … ” မင်းအသုံးမကျလို့ ငါရေးထားတာ နာဇီပါတီလက်သစ်မက ဖျက်သွားပြီ ” ဆိုတာ အခုထိသတိရတုန်းပဲ … ။
လူလွတ်တွေဝယ်စားပြီး အခန့်မသင့်လို့ မိုင်းထိတာတဲ့လား … နင်က ရိုင်းသာရိုင်းတာ စကားတော့လှည့်ပတ်ပြောတတ်ပုံရတယ် … ။၀ယ်စားတယ်ဆိုတာကလည်း အိမ်တောင်တခု ထူထောင်ဖို့ သတ္တိမရှိ ပဲ ၊ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် သားမယား တာဝန်မယူချင်ပဲ ပိုက်ဆံနဲ့ အရာရာဖြေရှင်းချင်တဲ့ သိမ်ဖျင်းတဲ့စိတ် ၊ သူများ သားသမီးကို ပိုက်ဆံပေးလျှင်ရတာပဲဆိုပြီး အမြတ်ထုတ်ချင်တဲ့စိတ်၊ ကြက်ခန်းသွားပြီး မိန်းမတကာရဲ့ အထိအတွေ့နဲ့သာယာနေတဲ့ကောင်တွေမို့လို့ အဲ့ဒီရောဂါဖြစ်တာ ရွံ့စရာ အကောင်းဆုံးပဲ ။ တချို့ ကောင်တွေ ဆိုလည်း လည်လွန်းတဲ့ ဘီး …. ပိုးရှိသွားတော သူများလို့ သတ်သတ်မှတ်မှတ် အိမ်ထောင် မပြုရဲကြလို့ ကြိတ်ပြီးဝယ်စားရရှာတယ် ။ အဆိုးဆုံးက လူလွတ်ဖြစ်ဖြစ် ၊ အိမ်ထောင်သည်ဖြစ်ဖြစ် အများတကာနဲ့ လိင်ဆက်ဆံနေတဲ့ မိန်းမတွေဆီ တဏှာရူးပြီးသွားလို့ကတော့ ဂနိုတင်မကဘူး လေးလုံးရောဂါပါ နောက်ဆက်တွဲပါလာနိုင်သေးတယ် … ။
ငါ့အရင်ပို့စ်တွေမှာကတည်းက သတိထားမိတယ် မကောင်းတာ လုပ်စားတဲ့ မိန်းမတွေကို ထိရင် နင်သိပ်နာတတ်တာပဲ ။ နာတာထက်ကို ဆတ်ဆတ်ခါအောင်ဖြစ်နေတာ ယောကျာ်းကြီးတန်မဲ့ ပန်းပန် ပြီး ထမိန်ဝတ်ထားဖို့ ကောင်းတယ် … ။ ကိုယ့်ဘ၀ရပ်တည်မှူအတွက် စီးပွားရေးလုပ်တာပါဆိုပြီး ရောဂါဆိုးတွေလိုက်ဝေနေတဲ့ မိန်းမတွေကို ငါက မကောင်းဘူးမပြောလို့ ဘုရားစင်ပေါ်တင်ပြီး ထိုင်ရှိခိုးထားရမှာလား ။ သွားသေလိုက် ။
ယောကျာ်းတိုင်း ၊ လူလွတ်တိုင်း နင့်လိုမဟုတ်ဘူး ငါတို့ အဖေတွေ ခေတ်တုန်းက နင်တို့လို့ ရွထဖို့ နေရာတွေသွားဖို့ မပြောနဲ့ ဘီယာဆိုင်တောင် ထိုင်ခဲ့ဖူးတာ မဟုတ်ဘူး ။ ၀င်ငွေနဲ့ ထွက်ငွေကာမိအောင် ၊ မိသားစုအတွက် ပိုက်ဆံရှာနေရတဲ့ ယောကျာ်းတွေ နင်လို့ တဏှာစိတ်နဲ့ ပိုက်ဆံဖြုန်းနေနိုင်ကြတာမဟုတ်ဘူး ။ အလကားနေရင်း ငါ့အဖေဆွဲမထည့်နဲ့ … ငါပြန်ပြောရလျှင် မကောင်းဘူးဖြစ်တော့ဘူး ။ ဟွန်း 
like နဲ့ dislike အပေါ် သံသယကြီးတာ မဟုတ်ဘူး လယ်ပြင်မှာ ဆင်သွားသလို ကွက်ကွက် ကွင်းကွင်း မြင်နေလို့ နင်လုပ်နေတာတွေ ထင်သာမြင်သာ ရှိလွန်းလို့ ကို ထောက်ပြလိုက်တာ အနာပေါ် ဒုတ်ကျတော့လည်း ဘယ်ခံနိုင်ပါမလဲ ။ ယုတ္တိရှိရှိတွေးစမ်းပါ နင့်ရဲ့ယုတ်ကြမ်းတဲ့စာတွေကို နင့်လို -ာသည်ဖောက်သည် နဲ့ -ာသည်မတွေပဲ like လုပ်လိမ့်မယ် ။
Super Saturday အမှတ်တရနဲ့ ကွန်ဒုံးပေါက်လို့ ကူးစက်ရောဂါ ရမလာပါစေနဲ့ လို့ပဲ ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ် ဘဲနာကြီးရေ ။
အဲလိုကိစ္စမှမဟုတ်ပါဘူး ဘယ်ဟာမဆို ဘာဝယ်ဝယ် ဈေးကြီးတိုင်း မကောင်းနိုင်ပါလို့…
ဒါကြောင့် ကာလသားရောဂါ ကုထုံးမှာ အိမ်ထောင်ရှိသူ .. သို့မဟုတ် အိမ်ထောင် မပြုသေးတဲ့ living together တွေ ဆိုရင် နှစ်ယောက်စလုံးကို ကုရမယ် .. ဒါမှ ရောဂါပျောက်မှာ .. ဒါမှမဟုတ်ရင် .. ယောက်ျားက မိန်းမ မသိအောင် ကြိတ်ကုပေမယ့် .. မိန်းမမှာ သူ မျိုးစေ့ ချထားတာလေးက အမြဲ ရှင်သန်နေမှာ .. အသိ မပေးပဲ တစ်ယောက်ထဲ ကုရုံနဲ့ မရဘူး
တစ်ခါတော့ လူနာတစ်ယောက် ကြုံခဲ့ဘူးပါတယ် .. တက္ကစီ သမားပါ .. ရင်းနှီးတော့ ဒီမှာပဲ လာပြပါတယ် .. ဂနိုကျတာပါ ..
သူ့မိန်းမကိုတော့ ဘာပြောပြီးခေါ်လာသလဲ ဆိုတော့ .. ဆရာမက အသားဖြူအောင် ဆေးထိုးပေးတယ် ဆိုပြီး ခေါ်လာတယ် .. ဆေးခန်းမှာ ကြိုတင် ဇာတ်တိုက် ထားရတာပေါ့ .. သူ့အိမ်ထောင်ရေး မပြိုကွဲချင်လို့ ညာတယ်ပေါ့ .. ဒါပေမယ့် ဆေးကုပေးလိုက်လို့ .. အမြစ်ပြတ်သွားတာ .. ဒါမှလဲ တခြား ကြောက်စရာတွေ ထပ်မဖြစ်မှာ ..
မိန်းမတွေကတော့ ဘာသိမှာလဲ .. အဖြူဆင်းတယ်လို့ပဲ ထင်နေမှာလေ ..
မဟုတ်ပါဘူး ဒါက သင်္ဘောသားတွေကြားထဲ ရေးပန်းစားခဲ့တဲ့ အဖြစ်ပျက်တစ်ခုလိုလိုပုံပြင်တစ်ခုခု လိုကိစ္စပါ..။ ပုံပြင်ဆိုရင်တော့ ပုံပြင်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် က အေးအေးဆေးဆေး ရိုးရိုးသားသားနေသူ သင်္ဘောသားတွေကို ထိခိုက်တဲ့ပုံပြင်ပါပဲ။
ကမ်းကပ်တိုင်း ပေါများတဲ့မိန်းမတွေကို ရှောင်ချင်တယ်။ရောဂါတွေကိုရှောင်ချင်တဲ့ သင်္ဘောသားရဲ့ အဖြစ်ကိုရေးထားတာပါ။ လူတိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။
အင်း…. ကြားဖူးတာကတော့ ဆပ်ပြာခဲရယ် ရေခဲရယ် ခုပြောနေတဲ့ဟာရယ်…။ ရေဆေးရင်သန့်တယ်လို့ ကြားဖူးမှတ်သားဖူးတာပဲ..။ ဟီးးးးးး
ကြေးကြီးကြီး မကြီးကြီး……ပေါက်သင်ညိုကို ဆောင်၊ ဦးထုပ်ဆောင်း ဒါက အကောင်းဆုံးပဲ..။
ဒီလိုပြောလို့ မိုးရေချိုးပါတယ်ဆိုမှ ခင်ဗျားက မိုးကာဝတ်ချိုးခိုင်းနေတာလားလို့မေးတဲ့လူတွေရှိမယ်။
ဒီတော့ ပြောစရာ မိုးကာဝတ်ချိုးတော့ မဖျားတော့ဘူးပေါ့ဗျာ..။ မဖျားတော့ မသေနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ..။ဒီတော့
ဒီလိုသန့်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ ယူဆချက်တွေ လွဲမှားနေတာကြောင့်
နေထိုင်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ နောက်တချက်ကတော့ မိမိဘက်ကစိတ်
ချရအောင် ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့နည်းကို ဘယ်လိုအခြေအနေမှာဖြစ်ဖြစ်
လုပ်ထားသင့်ပါတယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ထားတာက မိမိ အတွက်ဆုံးရှုံးမှု
မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိဘ၀မှာ စိတ်သန့်သန့်ဖြတ်သန်းပြီး
မိသားစုနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေထိုင်ချင်တယ်ဆိုရင် ခိုင်မြဲတဲ့သစ္စာတရား
ဒါကြောင့် အေအိုင်ဒီအက်စ် အပါအ၀င် ကာလသားရောဂါတွေကို ရှောင်ကြဉ်ဖို့ အတွက် ဆောင်ပုဒ် ရှိတယ်လေ ..
A = Abstain ဘာမှမလုပ်ရင် ဘာမှ မဖြစ်ဘူး ဆိုတဲ့ ရှောင်ကြဉ်ခြင်း
လိင်ကိစ္စကို ရှောင်လွဲလို့မရရင် အိမ်ထောင်ပြုတဲ့အခါ
B = Be faithful Both တစ်လင်တစ်မယား စနစ်နဲ့ အပြန်အလှန် သစ္စာရှိခြင်း ဆိုတာရှိလာပါမယ်
လိင်ကိစ္စကို ရှောင်လွဲလို့လဲ မရ .. အိမ်ထောင်လဲ မပြုချင်ရင် (သို့မဟုတ်) အိမ်ထောင်လဲ ရှိတယ် .. အိမ်ကွင်းနဲ့ မတင်းတိမ်နိုင်လောက်အောင် စိတ် ကြီးရင်တော့
C = Condom use consistently ကွန်ဒုံးကို အခါခပ်သိမ်း စနစ်တကျ သုံးစွဲသွားဖို့
အဲဒါမှ ကာလသားရောဂါဘေး ကင်းဝေးမှာ
လူ့ စိတ်ဆိုတာ ထိန်းချုပ်ရ ခက်ခဲတဲ့အတွက် ရောဂါဖြစ်လာတဲ့လူကိုတော့ ဘာမှ မပြစ် မတင်ချင်တော့ပါဘူး .. ကာမဘုံသားရယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပြီးပြီပဲ ..
အဲဒီ ABC ကို မလိုက်နာရင်
D = Disease ရောဂါ ရလာတဲ့ အဆင့်ရောက်လာပါမယ်
အေအိုင်ဒီအက်စ်အတွက် ဆိုရင်တော့ နောက်ဆက်တွဲ
E = Expired သေမယ်ပေါ့နော်
ရွာထဲမှာ ပညာပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒေါက်မိုး ရယ်။ (ဒေါက်ထွေးကို အားကျပြီး ရေးတာနော်။ မကြိုက်ရင်တော့ sorry ပါ။) ရွာထဲမှာနေရင်း သွားရင်း လာရင်း ဗဟုသုတရတာပေ့ါ။
နွယ်ပင်ရေ။ ကောင်းကောင်းပြောတဲ့လူကို ကောင်းကောင်းတုန့် ပြန်ပါမယ်။
၀န်ခံပါတယ်။ ရင့်သီးရုံတင် မကပါဘူး။ ရိုင်းတဲ့ အဆင့်မှာပါနေပါတယ်။
ဒီရွာထဲမှာ မိမိပြုသောကံ မိမိထံ ပြန်လာမည် ဆိုတာ ကြားဖူးမယ် ထင်တယ်။
သင်ကောင်းလျင် ကျွန်ုပ် မဆိုးပါ လို့ ပဲ ပြောပါရစေ။
Comment တွေကို အစအဆုံး ဖတ်ပြီးမှ ဝေဖန်ပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။
ခင်ဗျားနဲ့ အဲ့သည် ဒေါက်တာ အီးဒုံးဂို
အင်းအင်းအင်း……( နှုတ်ခမ်းမွှေးကို ပွတ်၍ ပွတ်၍ စဉ်းစားနေသည် )
Comment တွေကို အစအဆုံး ဖတ်ပြီးမှ ဝေဖန်ပါလို့ပြောချင်ရင် အရင့် အရင် ပို့စ်တွေ ပြန်ဖတ်ရလိမ့်မယ် နွယ်ပင်ရေ ။ ပြသနာတတ်နေရမှ နေသာ ထိုင်သာရှိတဲ့လူ … သူနဲ့ ငြိခဲ့တဲ့လူတွေ အများကြီးပဲ … ရွာထဲ စ၀င်ဝင်ချင်း ရိုင်းလွန်းလို့ … ကော့မန့် တခုမှာ သဂျီးကတောင် ရွာထဲ အ၀င်ကြမ်းတယ်လို့ မှတ်ချက်ပေးခဲ့ဖူးတယ် … ။ ကိုယ်ကိုယ်က မိုက်မဲတာပါဟယ် …အချိန်ကုန်ခံပြီး ပြန်ပြောနေမိလို့ … တဏှာရူးတွေ ကြည့်မရဘူးဆိုကတည်းက အဖက်လုပ်ပြီး ပြန်မပြောသင့်တော့ဘူးလေ ။
၀ယ်စားတယ်ဆိုတာကလည်း အိမ်တောင်တခု ထူထောင်ဖို့ သတ္တိမရှိ ပဲ ၊ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် သားမယား တာဝန်မယူချင်ပဲ ပိုက်ဆံနဲ့ အရာရာဖြေရှင်းချင်တဲ့ သိမ်ဖျင်းတဲ့စိတ် ၊ သူများ သားသမီးကို ပိုက်ဆံပေးလျှင်ရတာပဲဆိုပြီး အမြတ်ထုတ်ချင်တဲ့စိတ်၊ ကြက်ခန်းသွားပြီး မိန်းမတကာရဲ့ အထိအတွေ့နဲ့သာယာနေတဲ့ကောင်တွေမို့လို့ အဲ့ဒီရောဂါဖြစ်တာ ရွံ့စရာ အကောင်းဆုံးပဲ ။ တချို့ ကောင်တွေ ဆိုလည်း လည်လွန်းတဲ့ ဘီး …. ပိုးရှိသွားတော သူများလို့ သတ်သတ်မှတ်မှတ် အိမ်ထောင် မပြုရဲကြလို့ ကြိတ်ပြီးဝယ်စားရရှာတယ် ။ အဆိုးဆုံးက လူလွတ်ဖြစ်ဖြစ် ၊ အိမ်ထောင်သည်ဖြစ်ဖြစ် အများတကာနဲ့ လိင်ဆက်ဆံနေတဲ့ မိန်းမတွေဆီ တဏှာရူးပြီးသွားလို့ကတော့ ဂနိုတင်မကဘူး လေးလုံးရောဂါပါ နောက်ဆက်တွဲပါလာနိုင်သေးတယ် … ။
ဘယ့်နှာလုပ်ကြမလဲ ပုရိသ အပေါင်းတို့ 
ယောကျာ်းတိုင်း ၊ လူလွတ်တိုင်း နင့်လိုမဟုတ်ဘူး ငါတို့ အဖေတွေ ခေတ်တုန်းက နင်တို့လို့ ရွထဖို့ နေရာတွေသွားဖို့ မပြောနဲ့ ဘီယာဆိုင်တောင် ထိုင်ခဲ့ဖူးတာ မဟုတ်ဘူး ။ ၀င်ငွေနဲ့ ထွက်ငွေကာမိအောင် ၊ မိသားစုအတွက် ပိုက်ဆံရှာနေရတဲ့ ယောကျာ်းတွေ နင်လို့ တဏှာစိတ်နဲ့ ပိုက်ဆံဖြုန်းနေနိုင်ကြတာမဟုတ်ဘူး ။ အလကားနေရင်း ငါ့အဖေဆွဲမထည့်နဲ့
ဟဲ..ဟဲ..ဟဲ ချီးစားပြောရင်တောင် ချီးကြိုက်လို့စားတယ်ပြော။
ရွာသူရွာသားတွေ ကျုပ်ကို Like လုပ်ရင် သတိထားလုပ်ကြနော် ။ တော်ကြာ နေရင်ထိုင်ရင်း
ဖာသည် ဖောက်သည်နဲ့ဖာသည်မတွေ ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်။ စေတနာနဲ့သတိပေးတာပါ ။
ကျွန်တော်က ဒီရွာထဲကို ၀င်လာတဲ့ လူသစ်ပါ။
ရွာကလေး သာယာပုံ အခွင့်အလမ်းတွေရှိပုံ သတင်းကြားနဲ့ ၀င်လည်ပြီး နေထိုင်ဘို့ စိတ်ကူးများနဲ့ပါ။
ရာအိမ်မှုး ဆယ်အိမ်မှုးနဲ့ ရွာကြက်သရေအပြည့်နဲ့ထင်ထားပါတယ်။
ဗျိုး….. သူကြီး ဘယ်ရောက်နေလဲဗျ။
ကိုnigimi77 ရဲ့ သဘောထား လေး ကို တော့ ကြိုက်မိတယ်ဗျာ ။ မအီးတုံး ရဲ့ ဆေးခန်း ကို တော့ ဘာရောဂါ ဖြစ်ဖြစ် သွားမပြတာ ကောင်းမယ်ထင်တယ် ။ သူ က ဘုကြည့် ဂျို ရှိုး ရှိုးနေမှာ ဆိုတော့က
မိဘတွေ အပြင်း အထန် ၊ အတန်တန်တားနေတဲ့ ကြားက ၊ ငါတို့ယုံကြည်ချက် ခံယူချက်တွေ အတိုင်း ဆေးခန်းကို အတော်လေးချောင်ကျတဲ့ နေရာမှာ အခြေခံ လူတန်းစားတွေ အတွက် ဆေးဖိုးလောက်သာ ယူပြီးဖွင့်ထားတာ … တစ်နေ့ တစ်နေ့ ထမင်းဖိုးတောင် အခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ လူတွေကြားမှာ ၊ တဏှာထဖို့ ကျတော့ မိသားစု စားစရိတ်သုံးပစ် … ဗဟုသုတမရှိတော့ အကာကွယ်တွေ ၊ ကူးစက်ပုံတွေ နားမလည်ပဲ… ကူးတော့မှ ဟိုပြေးဒီပြေး …. ။ ဒီလို လူတွေကိုတော့ ဘယ်လိုမှ စိတ်ကောင်းမထား နိုင်တာ အမှန်ပဲ ။ ငါကြည့်မရလို့ မျက်နှာလွှဲထားပေမဲ့ … ဆေးခန်းကလူတွေ ဒင်းကို သူများနည်းတူပဲ တန်းတူ ကုသပေးလိုက်ကြပါတယ် ။
ကိုယ်ကောင်းလျှင် ခေါင်းမရွှေ့ ပါဘူး ။ ယုံကြည်ချက် ၊ ခံယူချက်ဆိုတာ လူတိုင်းမှာရှိတတ်ပေမဲ့ … တကယ်လက်တွေ့ အကောင်ထည်ဖော်ဖို့ရာတော့ … စိတ်ဓါတ်ပြင်းထန်တဲ့လူတွေပဲ လုပ်နိုင်တာပါ … ။ ခံယူချက်အတိုင်း စွဲမြဲစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေကွာ။
“တစ်နေ့ တစ်နေ့ ထမင်းဖိုးတောင် အခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ လူတွေကြားမှာ ၊ တဏှာထဖို့ ကျတော့ မိသားစု စားစရိတ်သုံးပစ် — ဒီလို လူတွေကိုတော့ ဘယ်လိုမှ စိတ်ကောင်းမထား နိုင်တာ အမှန်ပဲ”
In this situation, he can be considered “not fair to his family”,
even that, family affair cannot be justify by outsider (A Pyin Luu).
They may have their own problems (A Twin Yay).
On the other hand, if he isabachelor ( Lu Phyo )
then, it might be better not to blame this “Lu Phyo”.
Would you mind if I advice you something, E-tone ?
Please, may I advice you to learn about “What is biological calling”
Some doctors may explain you.
Sex is notadirty thing, this is barelyanormal biological calling.
Foreign Resident ရေ … မိန်းမအမျာစုက ဒီကိစ္စကို မုန်းကြတာမို့လို့ လက်မခံနိုင်တာပါ ။
တစ်ခုခုကိုပြောလိုက်လျှင် ငါရော ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုနဲ့ ပြန်တိုက်တတ်လို့ ….. နားလည်ပေးလိုက်ပါကွာ။
သင်​ကောင်းလျှင် ကျွနု​ပ်​မဆိုးပါ။ သင်​ဆိုးလျှင် သင့်​ထက်​ပိုဆိုးလျှင် ဆိုးမည်။
ပရိုအလုပ်တွေကို… (လိုင်စင်စာမေးပွဲမရှိရင်တောင်) ပရိုတွေလို.. (ဂုဏ်ယူစွာနဲ့)ကျင့်ကြံလုပ်ကြစေချင်ပါကြောင်း….။
ကျနော်ကခေါင်းစဉ်ပဲကြည့်ကြည့်ပီး လမ်းဘေးဈေးသယ်ရောင်းတဲ့မုန့်နဲ့ ဆိုင်ကြီးကြီးမှာရောင်းတဲ့မုန့်တွေအကြောင်း ထင်နေတာ
ဒီလို ရောဂါတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ပေါ့…လေ… ကျွန်တောင်္လည်း သိသလောက် ၀င်ပြီးလျှာရှည်ကြည့်တာပါ..။
ဂနိုရီးယားနဲ့ ရှန်ကာ ပေါ့လေ..။ ဂနိုဆိုတာက ဖြူပြစ်ပြစ် ပြည်ရည်လို မျိုးထွက်တာ…။ အဲဒိရောဂါ ဖြစ်လာပြီဆိုရင် အ၀တ်အစား အနေအထိုင်ဂရု စိုက်ရပါတယ်..။ ကိုယ့်နေရာမှာအတူနေတဲ့သူတွေကို အသိပေးရပါတယ်..။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဘာမှမဆိုင်တဲ့သူတွေကို ကူးစက်တတ်လို့ပါ..။ အ၀တ်အစားအတူတူ ၀တ်တဲ့သူတွေဆိုရင် ပိုပြီး အကူးစက်ခံရပါတယ်…။ အဲ ရှန်ကာဆိုတာက အသားပေါ်မှာ ကြယ်သီး ဖုလို ပေါက်တဲ့ အနာပါ..။ သူလည်း အရည်ကြည်ထွက်တတ်ပါတယ်..။ အဲဒိအရည်နဲ့ ဟို ဟာ ဗျာ အဲဒါ ထိရင် ကူးတတ်ပါသေးတယ်…။ တစ်ခ်တစ်လေ… ဘာမှမလုပ်ရဘဲ ဘာမှလည်း မဆိုင်ပဲ ကူးစက်တတ်ကြောင်းပါ…။ အဲဒိတော့ ရောဂါဖြစ်တိုင်း ဒီကိစ္စ လိုက်စားတယ်လို့ မဆိုနိုင်ကြောင်းပါ… ။ ရွာထဲက လူတွေ အပြင်စာဖတ် အရမ်းနည်းနေကြောင်း ပေးလာတဲ့ ကွန်မန်းတွေကြည့်ကြည့် ပြီး အားမလိုအားမရ ဖြစ်နေလို့ ဒီလိုရေးလိုက်မိကြောင်းပါ…။